Izintokazi zakuleli nemikhankaso noKelly Rowland
UKHWEZI Mahlambi nesihlabani somculi waphesheya kwezilwandle, uKelly Rowland, ababambisene naye emikhankasweni yeBrutal Fruit Isithombe: SITHUNYELWE
Bongiwe Zuma | June 9, 2022
SEZIQOKIWE izintokazi zakuleli ezizobambisana nesihlabani somculo waphesheya kwezilwandle emikhankasweni ehambisana nesiqholo esisanda kwethulwa seBrutal Fruit. Lezi zintokazi, okubalwa uNqobile Khwezi Mahlambi, Sinqobile Tusani, Thabsie Vokwana, Landiwe Gama, Victoria Paige, Thabee Happy, Lisa Magwebu noMpho Tsila, zizobe ziyingxenye yemikhankaso egqugquzela ukuzethemba, ukuzimela, ukuzithanda kwabesifazane noKelly Rowland. Baphinde bacobelelane ngolwazi lwezemfashini ukuzithuthukisa ngemikhakha eyahlukene okubalwa namabhizinisi.
UKhwezi waziwa kakhulu eThekwini ngokuba yingxenye yemikhankaso eyahlukene kulandela nokuthi phambilini uke wanqoba nesicoco sikaMiss Ushaka Marine.
Akagcinanga lapho kodwa waphinde waba yinxusa lenxanxathela yezitolo zaseGateway. Ukuqokwa kulo mkhankaso kuvele sekuqalile ukuvuna izithelo ezinhle kulezi zintokazi njengoba sezike zahlanganiswa noKelly.
UKhwezi uthole nethuba lokuhlala noKelly avulelane naye isifuba ngezinto ezahlukene nangemikhankaso yeBrutal Fruit. UKelly uqophe izinsuku ezine nezintokazi zakuleli kanti isiqephu sakhona sizokhishwa ngoJuni 22 yize esekhona nama-video ake wawanameka edansela umculo wamapiano ethakasele ukuba kuleli.
"Inhloso yalo mkhankaso ukuqopha iziqephu zamafilimu eziqhakambisa ubuhle. Uzizwe wamukelekile ngoba kuyakhuthaza, kubuyise nokuzethemba ukuzizwa usendaweni okuyona," kusho uKelly.
Owezokuxhumana kulo mkhankaso, uZama Ntuli, uthe lezi zintokazi zizoba yingxenye yalo mkhankaso kuze kube wu-Agasti kanti uKelly yena uzotheleka kuleli ngoNovemba bese eba nesithangami nabezindaba.